The Ab Presents Nepal » उपचार गराउन’ जर्मन जाँदा नाइजेरियन संसदका पूर्व उपप्रमुखको रामधुलाई !
उपचार गराउन’ जर्मन जाँदा नाइजेरियन संसदका पूर्व उपप्रमुखको रामधुलाई !
एजेन्सी -: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौलाको उपचारका लागि यतिबेला सिंगापुरमा छन् । १२ वर्षअघि मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओली थप उपचारको लागि सिंगापुर गएका हुन् । उनको सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य उपचारको लागि जर्मन गएका संसदका पूर्व उप-प्रमुखमाथि कुटपिट गरिएको छ । जर्मनमा बस्ने नाइजेरियन नागरिकहरूले संसदका पूर्व उपप्रमुख इके एकवेरेमाडूमाथि कुटपिट गरेका हुन् । उपचारसँगै जर्मनमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकसँग भेटघाट गर्न जर्मन पुगेका उपप्रमुखलाई उनीहरूले ‘तलाई लाज लाग्दैन्, आफ्नो देश फर्केर अस्पताल बना’ भन्दै विमानस्थलमै कुटपिट गरेका हुन ।
उपचार गराउनुसँगै एनडी इग्बो जर्मनी समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा भाग लिन जर्मन पुगेका थिए । जर्मन पुगेको बेला विमानस्थलमै उनीमाथि कुटपिट गरिएको हो । उनीमाथि कुटपिट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएसँगै भाइरल बनेको छ । नाइजेरिया सरकारले उक्त घटनाको छानविन थालेको छ ।
उक्त आक्रमणपछि राजनीति दलका नेताहरूलाई विदेश भ्रमणमा जाँदा सचेत रहन नाइजेरिया सरकारले अनुरोध गरेको छ । उक्त घटनाबारे विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरू बाहिर आइरहेका छन् । कोहीले नाइजेरियन नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा गरेका छन्, भने कोहीले विदेश उपचार गराउन आउने नेताहरूलाई पाठ सिकाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।